Kwebiwe izibhamu esiteshini samaphoyisa, eMkhomazi | News24
Kwebiwe izibhamu esiteshini samaphoyisa, eMkhomazi
Durban - Iqembu leNkatha Freedom Party lifuna uNgqongqoshe wezokuPhepha nokuVikelwa komphakathi kwaZulu-Natal uMxolisi Kaunda asungule ithimba elizophenya ngokwebiwa kwezibhamu esiteshini saseMkhomazi.
“Kumele kuphenyisiswe kahle ngalokhu ngoba imibiko ikhomba ukuthi kunesandla semfene ngaphakathikulesi siteshi.
“Kukhona nemibiko ethi kwebiwe namakhompyutha, namathayi ezimoto noNovemba wangonyaka odlule nangoJanuwazi, kodwa akukho okwenziwayo ngalokhu,” kusho uBlessed Gwala oyilungu le-IFP ePhalamende.
OLUNYE UDABA:Licishe lagqema amaphoyisa ikhehla libanjwa lenza ucansi emotweni
UGwala uqhubeke wathi kuyathusa ukuthi kungenzeka ubugebengu obufana nalobu esiteshini samaphoyisa kodwa kungabibikho inqubekela phambili ngophenyo.
“Izibhamu eziningi ezisendaweni eyodwa, ikakhulukazi ama-shortgun, yizona ezizingelwa yizigebengu kakhulu. Umphathi wesiteshi uyena okumele aqinisekise ukuthi izibhamu zigcinwa kuseyifu futhi isikhiye sihlala kuyena,” kuqhubeka uGwala.